प्रायः सोधिने प्रश्नहरू - Quanzhou Stamgon ट्रेडिंग कं, लिमिटेड
हामी तपाइँको गोपनीयता लाई महत्त्व दिन्छौं
हामी तपाइँको गोपनीयता लाई महत्त्व दिन्छौं। हामी कसैलाई हाम्रा ग्राहकहरूको सम्बन्धमा कुनै पहिचान योग्य जानकारी बेच्न, भाँडामा वा loanण दिदैनौं। हामी तपाईंलाई फोन वा मेल मार्फत बिन्ती गर्दैनौं। तपाइँले हामीलाई उपलब्ध गराउनु भएको कुनै सूचना उत्तरदायी रूपमा प्रयोग हुनेछ, अत्यन्त सावधानी र सुरक्षाको साथ हो, र तपाइँले सहमति नगरेको तरिकामा प्रयोग गरिने छैन।
सरल प्याकिंग प्रयोग गरी, प्रत्येक सेट प्लास्टिकको झोलामा प्याक गरियो, वा ठूलो सेट प्लास्टिकको झोलामा १० सेटहरू, वा अनुकूलित।
अधिक विवरणको लागि कृपया प्रत्येक उत्पादनमा "आकार" सेक्सन सन्दर्भ गर्नुहोस्। आकार चार्टको बारेमा, कृपया भ्रमण गर्नुहोस्: आकार चार्ट
के तपाइँ OEM सर्त स्वीकार गर्नुहुन्छ र OEM सर्तका लागि न्यूनतम मात्रा के हो?
हो, OEM सर्तलाई स्वागत छ र न्यूनतम मात्रा तपाईं अर्डर गर्नुहुने वस्तुहरूमा निर्भर गर्दछ। र कृपया स्पष्ट रूपमा मोडेल तस्वीरहरू पठाउनुहोस् जुन तपाईं हामीलाई आदेश दिन चाहानुहुन्छ, हामी त्यसलाई हाम्रो डिजाईनरलाई पेश गर्नेछौं, जब हामीसँग सामग्री छ, हामी समयमै तपाईंको लागि उत्पादन गर्न सक्दछौं। यदि छैन भने, हामी तपाइँको खोजी गर्नेछौं, र त्यसपछि उत्पादन। र नमूनाहरू पठाउनुहोस् अन्य आईटमहरूका साथ तपाईंको लागि आदेश दिन्छ ताकि तपाईं जाँच गर्न सक्नुहुनेछ।
हामी उच्च गुणस्तरको कपडा प्रयोग गर्दछौं जुन सजिलै पौडी खेल्न सुइट गर्न सकिन्छ, र समुद्री किनार शर्टका लागि १००% पॉलिएस्टर, वा अनुकूलित।
मूल्य र भुक्तानीको बारेमा
तपाईं हामीलाई सन्देश वा सोधपुछ पठाउन सक्नुहुनेछ, हामीलाई मनपर्ने उत्पादनहरूको संख्याको मोडल बताउनुहोस् र मात्रा अनुरोध गर्नुभयो, त्यसपछि हामी तपाईंलाई उद्धरण पठाउनेछौं।
छुट छुट नीति
हामी बिभिन्न मात्राको लागि छुट दिन्छौं, कृपया तपाईंको मात्रा मागको साथ सम्पर्कमा रहनुहोस्।
हाम्रो भुक्तान र बैंक रेमिट्यान्स जानकारी।
हामी क्रेडिट कार्ड, बैंक स्थानान्तरण स्वीकार गर्दछौं। सानो वा नमूना अर्डर, हामी सिधै अनलाइन भुक्तानी स्वीकार गर्दछौं।
यदि तपाईं बैंक मार्फत मलाई भुक्तान गर्न चाहनुहुन्छ भने, कृपया हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस्।
भुक्तान समयको बारेमा
हामी क्रेडिट कार्ड द्वारा अनलाइन द्रुत भुक्तान स्वीकार गर्दछौं। सामान्य भुक्तानी आदेशको days दिन भित्र हुनुपर्दछ। यदि त्यहाँ भुक्तानी ढिलाइ गर्न कुनै कारण छ भने, कृपया पहिले हामीसँग कुरा गर्नुहोस्। धन्यवाद।
न्यूनतम अर्डर मात्रा कति हो?
A: हाम्रो स्टॉक शैली को लागी, MOQ १० pcs प्रति शैली / रंग हुनेछ।
र अनुकूलित डिजाइनको लागि, MOQ: २०० टुक्रा प्रति शैली / रंग।
के तपाईं हाम्रो लागि नमूना बनाउन सक्नुहुन्छ?
A: हो, तर तपाईंले नमूना र कुरियर लागत तिर्नु पर्छ। तपाईं हामीलाई नमूनाको विस्तृत आवश्यकता पठाउन सक्नुहुन्छ ताकि हामी लागत र नमूना समय जाँच गर्न सक्नेछौं, तपाईंको भुक्तानी प्राप्त गरेपछि, हामी तपाईंको नमूना आदेश तुरून्त व्यवस्था गर्नेछौं।
के तपाईं उत्पादनहरूमा हाम्रो आफ्नै लोगो थप्न सक्नुहुन्छ?
हो: हो। हामी ग्राहकको लोगो थपेको सेवा प्रस्ताव गर्दछौं, कृपया पीडीएफ वा एआई प्रारूपमा लोगो डिजाइन आर्टवर्क पठाउनुहोस्।
कसरी जहाज गर्ने?
हामी अन्तर्राष्ट्रिय एक्सप्रेस प्याकेजहरू EMS / DHL / UPS / TNT बाट जहाजमा पठाउनेछौं, वा हामी समुद्री किनारामा जहाज गर्ने छौं यदि अर्डर क्युबाज 1cbm भन्दा बढी छ भने, त्यो मात्रामा निर्भर गर्दछ।
कति दिन लाग्छ?
सामान्यतया यसले working- working कार्य दिनहरू सम्पूर्ण विश्वमा लिनको लागि UPS ले, र MS-7 कार्य दिनहरू EMS द्वारा (रूस बाहेक), र -5--5 कार्य दिन TNT / DHL तपाई बस्ने क्षेत्रको आधारमा।
वितरण समय को बारेमा
जब तपाईं एक अर्डर राख्नको लागि तयारी गर्नुहुन्छ, हामी पहिले तपाईंको अर्डर जाँच गर्नेछौं र २ 24 घण्टा भित्र तपाईंलाई चलानी पठाउँनेछौं। र स्टक आईटमहरूको लागि हामी days दिन भित्रमा डेलिभर गर्नेछौं, अन्यथा हामी तपाईंसँग डेलिभरी समय पुष्टि गर्नेछौं।
अर्डर अघि मलाई शिपिंग लागत बताउनुहोस्
शिपिंग लागत तौल, भोल्यूम र डेलिभरी मार्ग (EMS, DHL, TNT, UPS, वा समुद्री ट्रान्जिट) र गन्तव्य देशमा निर्भर गर्दछ। त्यसोभए हामीलाई अर्डर गर्नु अघि हामीलाई सटीक शिपिंग शुल्क घोषणा गर्न गाह्रो हुन्छ ( एक टुक्रा बिकिनीको शुद्ध वजन लगभग ०.२ केजी हो, तर भोल्यूम तौल ०. 0.5 केजी / पीसी हो)। र तपाईले मनपर्ने शिपिंग कम्पनी छनौट गर्न सक्नुहुनेछ र हामी सबै अभिव्यक्तिको जाँच पनि गर्नेछौं र तपाईका लागि सब भन्दा उपयुक्त तरीका पनि सुझाव दिनेछौं।
वापसी र सर्तहरूको बारेमा
हामी उत्पादन र सेवाहरूको गुणस्तरलाई महत्त्व दिन्छौं, त्यसैले पार्सल पठाउनु अघि हामीले फेरि दुई पटक जाँच गर्नुपर्नेछ र आफै प्याकेजिंग गर्नुपर्नेछ।
कसरी व्यवहार गर्ने, यदि वस्तु दोषपूर्ण छ?
हामी दु: खी छौं कि वस्तु दोषपूर्ण छ, र हामी सक्रिय रूपमा त्यस्ता घटनाहरूको सामना गर्नेछौं। हामीलाई तपाईको सहयोग पनि चाहिन्छ।
पहिले: यदि वस्तु त्रुटि हो भने, हामीलाई वितरण को days दिन भित्र सूचित गर्नुहोस्।
दोस्रो: कृपया आइटम को तस्वीर दोषपूर्ण छ को लागी शूट गर्नुहोस्, र त्यसपछि तस्वीर ईमेलमा हामीलाई पठाउनुहोस्, ताकि म तिनीहरूलाई हाम्रो टेक्निकल निर्देशकमा बुझाउन सक्छु, उनी जाँच गरे र सहमत भएपछि, हामी तपाईंको अर्को अर्डरमा नयाँ थप्नेछौं। सित्तैमा
फिर्ता वा रद्द नीति
अधिक सुविधाजनक ग्राहक सेवाहरू प्रदान गर्नका लागि, हामी रिटर्न स्वीकार गर्दछौं र २h घण्टा भित्र रद्द आदेश जारी गर्दछौं।
सबै भन्दा माथि, हाम्रो वेबसाइट मा अर्डर राख्नु भएकोमा धन्यवाद www.stamgon.com । तपाईंको सन्तुष्टि हाम्रो प्रेरणाको सबैभन्दा ठूलो स्रोत हुनेछ।
हामीले तपाइँलाई समान एक्सप्रेस कम्पनीको ट्र्याकिंग विधि क्षणिक रूपमा फेला पार्नको लागि पृष्ठ सेट गर्नुभयो र आशा छ कि यसले तपाईंलाई अर्डर ट्र्याकिंग जाँच पूरा गर्न मद्दत गर्दछ।
यसको मतलब यो हो कि हामीले ट्र्याकि number नम्बर प्राप्त गर्दा हामीले तपाईंको अर्डर पठाएको छ। तपाईं मा आफ्नो प्याकेजको स्थिति जाँच गर्न सक्नुहुनेछ ट्र्याकिंग अर्डर पृष्ठ । कुनै प्रश्न, कृपया हामीलाई स्वतन्त्र रूपमा सम्पर्क गर्नुहोस्!
पुनश्च: कहिलेकाँही तिनीहरूको वेबसाइटमा जानकारी अपडेट गर्न ढिलाइ व्यक्त गर्नुहोस्। त्यसैले कृपया धैर्य गर्नुहोस् र केही समय पछि यसलाई जाँच गर्नुहोस्। तपाइँको समझ अत्यधिक सराहना गरिनेछ, धन्यवाद!